Hypersexual Disorder အတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်များ၏အစီရင်ခံစာ။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
Hypersexual Disorder များအတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်အတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ (2012)
comments: အဆိုပါလာမည့် DSM-5 hypersexual ရောဂါပါဝင်သည်ရပါမည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်. နိဂုံးကျိုးနွံလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူသူတို့အားတိကျစွာအခြေအနေကိုစူးစမ်းဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ် hypersexual disoder တည်ရှိပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ လေ့လာမှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးတွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြရန်ကြည့်ရှုပါ။
J ကိုလိင် Med ။ 2012 အောက်တိုဘာ4။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x ။
ရိဒ် RC, လက်သမား BN, ချိတ်ဖြစ်မှု, Garo S က, JC Manning, Gilliland R ကို, Cooper က eb, McKittrick H ကို, Davtian M က, Fong သည် T-.
UCLA ရဲ့စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Biobehavioral သိပ္ပံဌာန, ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့, Los Angeles မြို့,, CA, စိတ်ပညာ၏အမေရိကန်နိုင်ငံဌာန, ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်, Provo, UT, စိတ်ပညာ၏အမေရိကန်နိုင်ငံဌာန, မြောက်အမေရိကတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်, ဒဲ, တက္ကဆပ်၏ယူအက်စ်အေဦးစီးဌာန စိတ်ပညာ, တက္ကဆက် Tech မှတက္ကသိုလ်, လဂ်ဘုခ်, TX, အမေရိကန်နိုင်ငံပုဂ္ဂလိကအလေ့အကျင့်, Denver, CO, စိတ်ပညာ၏အမေရိကန်နိုင်ငံဌာန, ဗိမာနျတျောတက္ကသိုလ်, Philadelphia တွင်, PA, USA ။
diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, hypersexual ရောဂါ (HD ကို) အတွက်ပဉ္စမ Edition ကို (DSM-5) စံ Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဖမ်းယူဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders အပေါ် DSM-5 သူ Work Group မှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပြုထားစံတရားဝင်လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုအတွက်အကဲဖြတ်လိုအပ်သည်။
ဤသည် DSM-5 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ် hypersexual အပြုအမူများအတွက်ကုသမှုရှာကြံလူနာတစ်ဦးကိုနမူနာတစ်ခုယေဘုယျစိတ်ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related ရောဂါအတွက် HD ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ Method ကို။ လူနာ (N ကို = 207) က HD ကိုစံ၏အကြားအဆင့်သတ်မှတ်သူယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးဖြတ်ရန်မကျြစိကှအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် psychopathology နှင့် HD ကိုများအတွက်အကဲဖြတ်နှင့်အချိန်ကျော် HD ကိုစံ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့တတိယအဆင့်သတ်မှတ်သူက 2-ရက်သတ္တပတ်ကြားကာလအောက်ပါခဲ့ကြသည်။ လူနာကိုလည်း HD ကိုစံ၏တရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန် Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာတစ်ခုအရေအတွက်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
HD နဲ့ psychopathology ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့အင်တာဗျူးတွေ, အ Hypersexual အပြုအမူ Inventory, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးနှင့် Hypersexual အပြုအမူအကျိုးဆက်များစကေးဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ စိတ်ခံစားမှု dysregulation နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကျရောက်နေတဲ့ Neo ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Inventory-Revised အပေါ်ရှုထောငျ့ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ။ Inter-အဆင့်သတ်မှတ်သူယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်သောကြီးနှင့် HD ကိုစံအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုပြသခဲ့သည်။ sensitivity နှင့်တိကျသောညွှန်းကိန်း HD ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်တိကျစွာလူနာအကြားပစ္စုပ္ပန်ပြဿနာရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ HD ကိုများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ hypersexuality, Impulse, စိတ်ခံစားမှု dysregulation နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကျရောက်နေတဲ့အဖြစ်ကောင်းသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏သီအိုရီအ related အစီအမံတွေနဲ့ကောင်းသောတရားဝင်မှုပြသခဲ့သည်။ HD ကိုများအတွက်အကဲဖြတ်လူနာများသည်လည်းအထွေထွေစိတ်ရောဂါအခြေအနေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-ဆက်စပ်ရောဂါရောဂါများထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ကြ၏ hypersexual အပြုအမူများအတွက်အကျိုးဆက်များတစ်ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders အပေါ် DSM-5 သူ Work Group ကအဆိုပြုထားသောအဆိုပါ HD ကိုစံ HD ကိုအကဲဖြတ်အပေါ်ကျိုးနွံလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအဆင့်သတ်မှတ်သူ၏အုပ်စုတစုအကြားတစ်ဦးလက်တွေ့ setting ကိုလူနာမှလျှောက်ထားသည့်အခါမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုကိုသရုပ်ပြဖို့ပေါ်လာပါသည်။
hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်အတွက်ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, Gilliland R ကို, Cooper က eb, McKittrick H ကို, Davtian M ကများနှင့်တွေ့ရှိချက်များ Fong သည် T. အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med **; **: ** - ** ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအဘို့အ© 2012 နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း။
မီဒီယာများက 'လိင်စွဲလမ်းမှု' သည်အမှန်ဖြစ်သည်
“ လိင်စွဲလမ်းမှုသည်တကယ့်ရောဂါဖြစ်သည်” ဟု Daily Mail ကဖော်ပြသည်။ သတင်းစာ၏ပုံပြင်သည် hypersexual disorder ဟုခေါ်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါအသစ်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ်အခြေခံသည်။
Hypersexual ရောဂါ (HD) ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာအတော်များများကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောတစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အတွက်စေ့စပ်အလွန်အကျွံအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်တိုကျတှနျးထားသို့မဟုတ်အဘို့အစီစဉ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျအတွက်ပါဝင်သည်။ ဤသည်အဆက်မပြတ်ထို့နောက်လူမှုရေးဘဝသို့မဟုတ်သိမ်းပိုက်ဖို့သိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒီ model ကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့သောခဲ့ပေမယ့်, ကသေးတရားဝင်တစ်စိတ်ရောဂါရောဂါအဖြစ်ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အထူးသ hypersexual ရောဂါသေးသည့် Diagnostic ၏အဆိုပြုစာသားနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, ပဉ္စမ Edition ကို (DSM-5) အားထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမထားပါဘူး။ ဒါကအားလုံးအသိအမှတ်ပြုစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများစာရင်းအဓိပ္ပါယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ DSM-5 2013 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုခံရမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုမှာသုတေသီ, HD အပါအဝင်အခြေအနေများတစ်အရေအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းရည်ညွှန်းသူထက်ပိုမို 200 လူနာမေးမြန်းထားသည်။ လူနာရည်ညွှန်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေ HD ကိုများအတွက်အဆိုပြုအသစ်များကိုစံသတ်မှတ်ချက်ကိုထင်ဟပ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့အင်တာဗျူးသတိထားမိကြဘူး။ အဆိုပါလေ့လာမှုအင်တာဗျူးလူနာ HD ကိုခဲ့သောအကြောင်းကိုသဘောတူညီချက်အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်, ထိုအဆိုပြုအသစ်များကိုစံသတ်မှတ်ချက်တိကျစွာလူနာအစီရင်ခံပြဿနာများကိုထင်ဟပ်သော။ အဆိုပါလေ့လာမှုကို HD များအတွက်အဆိုပြု '' ရောဂါလက္ခဏာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း '' တစ်ဦးအသုံးဝင်သော tool ကိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှုများဤအမြိုးမြိုးမီဒီယာအချို့ကဏ္ဍများအတွက် sniggering ရှိနေသော်လည်းထိခိုက်သူတို့အားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့သုတေသန၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။
hypersexual ရောဂါများအတွက်စံ (သို့မဟုတ် 'လက္ခဏာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း') သုံးခုအဓိကအချက်များပေါ်တွင်အခြေခံထားတယ်။
အထပ်ထပ်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာတိုကျတှနျးထားသပါဝငျနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်ပြည်နယ်များ (ဥပမာ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ပျင်းနဲ့စိတ်တိုတာတွေ) ကိုတုန့်ပြန်အပြုအမူ
C. လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ တိုက်တွန်းချက်များနှင့်အပြုအမူများသည်ပြင်ပပစ္စည်းများ (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများ) ၏တိုက်ရိုက်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှု၊ အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်သူရဲကောင်းဖြစ်စဉ်များကြောင့်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်, မြောက်အမေရိကတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်, တက္ကဆက် Tech မှတက္ကသိုလ်နှင့်ဘုရားကျောင်း University မှသုတေသီတွေကကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်ပရန်ပုံငွေအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆခြင်း, မေးလ် "အစဉ်အလာနာမည်ကြီးတွေ philandering တစ်ခု '' ဆင်ခြေ '' အဖြစ်ကိုချွတ်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့" သည်ဟုတစ်ခုခုအဖြစ် Self-ဝန်ခံ "လိင်စှဲလမျးသူ" စယ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဓာတ်ပုံနှင့်လိင်စွဲလမ်း၏ဖော်ပြချက် အသုံးပြု. ၎င်း၏ဇာတ်လမ်းကိုဖွင့် sexed ။
အဆိုပါစက္ကူတစ်ခုစွဲ hypersexual ရောဂါခေါ်ခြင်းမမှန်ကန်ပါ။ ဒါဟာကဲ့သို့သောခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ စွဲလမ်းမှု၏အဓိပ်ပါယျပုံမှန်ဇီဝကမ္မမှီခို၏ Element တစ်ခုရဲ့ပါဝင်သည်။
ဒါဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအမျိုးအစားအဖြစ် hypersexual ရောဂါဖော်ပြရန်ပိုပြီးတိကျပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ပုံစံများပုံမှန်မဟုတ်သောဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပုံပျက်ရသောအခြေအနေများနှင့်မကြာခဏ Self-ဖျက်ဆီး, အပြုအမူဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်ဤကိစ္စတွင်စိတ်ရောဂါဆေးခန်းထဲမှာတစ်ဦး "အစစ်အမှန်" အခြေအနေမျိုးတွင်ကောက်ယူသုတေသနဆိုလိုတာကတစ်ဦးကိုလယ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများတိုကျတှနျးထား, HD ကိုများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာပါဝငျဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုသညျကားနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ညစ်ညမ်း, ဘာ, တယ်လီဖုန်းလိင်နှင့်ချွတ်ကလပ်အပါအဝင်အပြုအမူတွေ။
Hypersexual ရောဂါ, သုတေသီဆိုသညျကား, သိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်လူမှုရေးအရနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာလူနာတွေကိုချို့ယွင်း။ hypersexual အပြုအမူများ၏ဖော်ပြချက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိခဲ့ကြပေမဲ့လည်းစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်သာမကြာသေးမီကကလက်တွေ့ရောဂါထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်၏ပုံမှန်မူကွဲဖြစ်နိုင်သည်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
hypersexual ရောဂါများအတွက်အသစ်ရောဂါဟာ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, အမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကထုတ်ဝေစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း၏ပြည့်စုံခွဲခြားများအတွက်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြားကာလမှာနောက်ဆုံးရေးသားချိန်, အ DSM ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ တချို့ကဆရာဝန်များ hypersexual ရောဂါလာမည့်ထုတ်ဝေ (DSM-5) တွင်အသစ်တခုရောဂါအဖြစ်ပါဝင်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသုတေသန 207 လူနာ 18 အသက်နှင့်ကျော်ကျပန်း hypersexual ရောဂါ, စိတ်ရောဂါအခြေအနေများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related မမှန်များအတွက်ကုသမှုပေးကြောင်းအမေရိကန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ရောဂါဆေးခန်းကနေရှေးခယျြထားပါဝင်သည်။ ဒီလိုလူနာ, 152 hypersexual ရောဂါအတှကျအရညျညှနျးခဲ့သညျ။
အင်တာဗျူးစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, လူမှုရေးအလုပ်သမားများ, လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုသနှင့်ဘွဲ့လွန်လက်တွေ့စိတ်ပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများအပါအဝင်နောက်ခံ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကနေ 13 တစ်ဦးချင်းစီရှိကြ၏။ ဤသည်မတူကွဲပြားမှု, သုတေသီဆိုသညျကား, သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက် DSM ကိုအသုံးပြုဖို့သူအကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထင်ဟပ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အကြောင်းတစ်ဝက်အဖွဲ့သည်ရုံးတင်စစ်ဆေးမတိုင်မီ hypersexual လူနာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး။
အဖွဲ့၏အဘယ်သူမျှလူနာတွေအတွက်ရည်ညွှန်းခဲ့သောအရာကိုသိသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူးပို့ချသင်တန်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လည်းမေးခွန်းများကိုပါ (HD ကိုအဖြေရှာတဲ့လက်တွေ့အင်တာဗျူးသို့မဟုတ် HD ကို-DCI ခေါ်) hypersexual ရောဂါများအတွက်အသစ်များကိုစံသတ်မှတ်ချက်ကိုထင်ဟပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရာများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောတွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်နားထောင်ခဲ့တယ်။
အားလုံးလူနာပထမဦးဆုံးသူတို့ hypersexual ရောဂါရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ရည်ရွယ်အဖွဲ့များထဲမှနှင့်အတူအသေးစိတ်အင်တာဗျူးခဲ့ပြီးတော့တစ်ဦးစံစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီခံယူ။ အဆိုပါမေးခွန်းများကိုအနီးကပ်အဆိုပြုထားသစ်ကိုအဖြေရှာတဲ့စံ mirror မှ phrased ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့လူနာလည်းသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်ကူညီရန်သစ်စံရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဒီဇိုင်း Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာတစ်ခုအရေအတွက်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
တစ်ဦးချင်းစီအင်တာဗျူးအဘို့နှစ်ခု "အဆင့်သတ်မှတ်သူ" ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား ratings မှမြင်နိုင်ခဲ့ကြသူအများသောအားဖြင့်စည်းဝေးကြ၏။ အခြားလေ့လာတွေ့ရှိစဉ်တစ်ခုမှာအဆင့်သတ်မှတ်သူအင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နှစ်ပတ်ကနဦးတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးနောက်တတိယအဆင့်သတ်မှတ်သူတစ်ဦးချင်းစီစိတ်ရှည်နှင့်အတူ, HD-DCI အင်တာဗျူးအကြိမ်ကြိမ်။
သုတေသီများထို့နောက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်သတ်မှတ်သူ hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့သဘောတူညီခဲ့နှင့် 32 လူနာများအနက်အချို့သာလျှင်, သူတို့သည်လည်းဒုတိယစမ်းသပ်မှုကနေ diagnoses, နှစ်ပတ်အတွင်းအကြာတွင်မူလ diagnoses ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုဘယ်လောက်ဝေးမှာကြည့်ရှုကြ၏။ သူတို့ကရောဂါရှာဖွေစံခိုင်လုံသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခဲ့ကြသည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောစံစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
Inter-အဆင့်သတ်မှတ်သူယုံကြည်စိတ်ချရ (IRR) 93% မှာမြင့်မားခဲ့သည်။ ဒါကအင်တာဗျူးအများအားဖြင့်လူနာတွေ hypersexual ရောဂါ (0.93, 95% များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှိမရှိအပေါ်သဘောတူညီခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည် ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ 0.78 မှ 1) ။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု-retest ယုံကြည်စိတ်ချရသဘောတူညီချက်ထဲမှာရရှိလာတဲ့ 29 32 ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူမြင့်မားခဲ့သည်။
sensitivity (လူနာများ၏အချိုးအစားမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသူအ hypersexual ရောဂါများအတွက်ရည်ညွှန်း) နှင့်တိကျသော (လူနာများ၏အချိုးအစားမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသူအ hypersexual ရောဂါထက်အခြားအခြားတစ်ခုခုလို့လည်းခေါ်တယ်) hypersexual ရောဂါများအတွက်အသစ်များကိုစံသတ်မှတ်ချက်တိကျစွာလူနာရည်ညွှန်းခဲ့ပြဿနာများကိုထင်ဟပ်ပြသ အဘို့။
hypersexual ရောဂါအတှကျအအကဲဖြတ်လူနာများသည်လည်းအထွေထွေစိတ်ရောဂါအခွအေနေတစ်ခုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related ရောဂါဖြစ်စေရောဂါရှိသူများထက် "သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်" ဖြစ်ကြောင်း hypersexual အပြုအမူများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များတစ်ဦး "ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း" ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအလုပ်ဆုံးရှုံးခြင်း, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဆုံးရှုံးမှု, ဥပဒေရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများပါဝင်သည်။
အဆိုပါသုတေသီများသည်ဤ hypersexual ရောဂါ၏အဆိုပြုအသစ်သောရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေကြောင်းထောက်ပြ။ ဒါဟာအသစ်များကိုစံသတ်မှတ်ချက် hypersexual ရောဂါအကဲဖြတ်အပေါ်ကျိုးနွံလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအဆင့်သတ်မှတ်သူ၏အုပ်စုတစုကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးလက်တွေ့ setting ကိုလူနာမှလျှောက်ထားသည့်အခါမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုကိုသရုပ်ပြဖို့ပေါ်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
hypersexual ရောဂါ၏လေ့လာမှုစိတ်ကျန်းမာရေး၏လယ်ပြင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအတွင်းကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားဧရိယာဖြစ်ပါတယ် (နှင့်သင်တန်း၏စာနယ်ဇင်းမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်) ။ ဒီလေ့လာမှုကအဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့စံလူနာကဒီဒေသမှာနှင့်လည်းသူတို့ကအလေ့အကျင့်အတွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြစ်ကြောင်းရှိသည်ပြဿနာများကိုထင်ဟပ်ပြပုံရသည်။ နောက်ထပ်သုတေသနကဤစံနှုန်းများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်လည်းအကောင်းဆုံးကုသစေခြင်းငှါဘယ်လို hypersexual ရောဂါများ၏ပြဿနာအပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမှာအလားအလာအားနည်းခြင်းကပိုရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရကင်းမဲ့စေခြင်းငှါအရာ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများနှင့်ရောဂါရှာဖွေစနစ်တကျအင်တာဗျူးများ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, လေ့လာမှုများဤအမြိုးမြိုးကိုမဆိုမမှန်သောလက္ခဏာသို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ diagnoses ၏အတိုင်းအတာတစ်ခုကို un-ရည်ညွှန်းကျန်းမာအသိုင်းအဝိုင်းပိုမိုပုံမှန်နမူနာအတွက်အကဲဖြတ်နိုင်ဒါရောဂါအဆန်းသည်အဘယ်မှာရှိလူဦးရေအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲနေကြသည်။
သင်ဆိုးရွားစွာသင်၏အသက်ကိုထိခိုက်ကြောင်းလိင်ဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့ obsessive နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သဘောထားကိုရှိစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ဆိုလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောပြောနေတာကုထုံးသိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံးအဖြစ်ရရှိနိုင်အတော်ကြာကုသ, ရှိပါတယ်။ အကြောင်းပိုမို Read လိင်စွဲကုသ.
အားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Bazian။ မှတည်းဖြတ်သည် NHS ရွေးချယ်မှု။ လိုက် twitter အပေါ်ခေါင်းစီးသတင်းနောက်ကွယ်မှ.
သတိပေးချက် - အင်တာနက် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏တစ်နေ့တာ၏မဖြစ်မနေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအများကအဲဒါကိုလိုပဲဆက်ဆံကြသည်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ t.co/EMvjfAM7fV
လူငယ် ၂ ယောက်၏ ၄ မိနစ်ကြာဗီဒီယို - "သင် porn ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲ" t.co/mGwj9MfiX6